Bhati, Massage, Kusimba | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: Bath, Massage, Fitness
Ndezvipi zvidzidzo zveFLEX zvakanyatsogadziriswa? Chii chavanoita uye chinobatsira?
Chii chinonzi FLEX Kutambanudza makirasi? Izvo zvinokurudzira uye zvinopa chii? ehe ... yazvino mune yakasarudzwa seti kubva kumakore manomwe, nepo marunda akatambanuka! uye pano, "sei ...
Ndingakwanisa kubvisa mbongoro yangu here?
Zvinoita here kupomba dhongi nemachira? Iwe haugone kupomba ne squats. Makwati achizunza zvidya. Galina, maziso uye huropi hwehuku uye kwete maitiro akadaro izvozvi zvapihwa pamusoro wenyaya: pomba dhongi rako CHETE ne squats uye iwe unogona! ...
Intervertebral disc disc protusion with dural sac compression!
Kufuratirwa kweiyo intervertebral disc pamwe nekumanikidza kwedural sac! protrusion-kutanga kwehernia)) uye zvinoita sekunge huta hunokanganiswa)) kurwadziwa kwakanyanya kwekuzvimba kunogoneka)) kuraira (kana paine kutenderera mu thoracic kana lumbar vertebra) kuturika ...
Chii chinonzi aerobics? Chii chinonzi aerobics?
Unoitei iwe mueerobics? Chii chinonzi aerobics? Aero # 769; bika (inozivikanwawo seyakanaka jimunasitikisi) jimunasitikisi ine mutinhimira unobatsira kutevedzera mutinhimira wezviitwa. Iyo seti yechiitwa inosanganisira ...
Lymphatic drainage massage - chii icho?
Lymphatic drainage massage - chii icho? Chimwe chinhu senge vibration massage Chinyorwa massage lymphatic drainage inoitwa kuitira kubvisa kumira kwemvura mumatumbu, mhanyisa lymph kuyerera, kugadzirisa matishu metabolism uye chikafu, kushingaira kubvisa chepfu. Main…
Ndeapi maawa ekurapa maitiro evanhu pazuva rekushanda? Chii chinowanzoenderana nekodhi yebasa?
masseur ane mangani mangani pazuva rekushanda? Ndeipi tsika pasi pekodhi rebasa? 15-20 vanhu 36 INI nekugara kwemazuva mashanu uye rinoshanda maawa masere. pasi peLabour Code ...
musana wangu unorwadza. musana wangu unorwadza mushure mekugara kwenguva refu pachigaro kunobatsira kupora
musana wangu urikurwadza. musana wangu unorwadza mushure mekugara pacheya kwenguva yakareba, ndibatsirei kuti ndigone Edza kugara kwete kuseri kwechigaro, asi pachigaro. Iva nenzvimbo yakanaka ndipe tsamba yako !! ! ...
Kuenda kuSauna kwekutanga. Chii chaunofanira kutora newe?
Ndiri kuenda kune sauna kekutanga. Chii chekutora newe? vasikana .. Beer shamwari uye mukomana hapana! tauro rakafara, kapu yevhudzi, munyu wekuzora mumuviri, kukwiza mukati, mushure mekuwacha uye ...
Chii chinonzi chekisi? Uye nei uchivaratidza?
Chii chinonzi chepfu? Uye nei uchivabuditsa? Uye ini handiverengi avatar yaValeria. Zvidzidzo zvakaratidza kuti dzinosvika makumi mapfumbamwe nemasere muzana yevakafa pasi rese vari kukonzerwa nezvirwere zvakasiyana siyana. ...
Unokuvadza zvakasimba mitsipa yemakumbo mushure mekunyanya kuwandisa. Zvaunofanira kuita
Tsandanyama dzemakumbo dzakanyanya kurwadziwa mushure mekuwandisa. Zvekuita? Edza aqua, mushure mekunge hapana mhasuru dzinokuvara. Ivo vachapfuura vega! iwe haugone kubatsira mune chero nzira kana vakukuvadza iwe zvirokwazvo mushure mekurovedza muviri. Massage,…
Ndekupi kushamba? Moscow
Kugeza kupi? Moscow Kuntsevskie mabhati - 350 rubles risingagumi nguva Pane zvakawanda zvingasarudzwa: 1. Tenga kuyerera-kuburikidza nemvura hita. Gore rinouya vanozoidzima zvakare, saka ichanyatso kukwana. Yakachipa kwazvo (tsime ...
pamusoro pekusimbisa. Nyora nhetembo pamusoro pekukema. Zvichida 4 mitsara
nezve kukwiza muviri. Ndokumbirawo unyore nhetembo nezve kukwiza muviri. Angangoita mana mitsetse Ngatiedzei kufungidzira kuti munyoro languor anofukidza muviri wako segumbeze Yakareba ichida kuzorora Uye mumwe munhu ...
Ndinofanira kuva nedzidzo yezvokurapa kuti ndishande sechiremba wekusimbisa kana kupedza zvidzidzo here?
Ini ndinofanira here kuva nedhigirii rekurapa kuti ndishande sechiremba wekusimbisa muviri kana kuti zvakakwana kupedzisa makosi? zvirokwazvo. uye mberi. usafunge kuti iyi mari iri nyore uye muhombe. ibasa rakaoma repanyama uye retsika ...
Nzira yekuputira latissimus muscle back wings ..
Kupomba sei mhasuru dze latissimus dzemapapiro ekumashure .. mamwe maexercise: 1. dhonza nekusunga kwakakora, neshure kwemusoro kubhawa 2. yakamira, dhonza bhawa kuenda mudumbu 3. kumashure yakanangana nepasi, tsoka imwe pasi ...
Chii chaunoda kutora newe kubhadharo?
Chii chaunoda kutora newe kuenda kune sauna? Murindi, ndiye achatora zvasara! Saka, tinoenda kuimba yekugezera. Chii chaunoda kuenda newe kunogeza kunze kwemucheka wakachena? Saka tinonyora: ...
Nzira yekushandisa sei bamboo shandi mubhati? Iwe unofanirwa kuidya here?
Mashandisiro ekushandisa matanda emishenjere mune sauna ?? Vanofanira kunge vakapiswa? Ini handizive nezvemabhanzi emishenjere. Zvimiti zvinoshandiswa semasaja. Zviri nyore kushandisa sedanda. Izvo chete zvinoitwa kwete muchoto chemukati, asi mushure me ...
Nzira yekupwanya musana wako, pasina rubatsiro rweumwe munhu, iwe pachako?
Maitiro ekuzvimonera musana wako wega, pasina rubatsiro rwemumwe munhu, wega? Kuzviporesa iwe hunyanzvi asi hunobudirira hunyanzvi hwekuzvikuvadza! Dzimwe nguva zvinobatsira kurara pasi, kudhonza mabvi pachipfuva, kuputira maoko ako pamakumbo ako. Bvisa kubva ...
chii chinoshambidza hamam?
chii chinonzi hamam bath? Turkish bath from a kischa (IZVI ndezve apo musana unokwizwa neakasukwa jira, rinobvisa tsvina) Isu taive muTurkey ndokuenda kunogeza kwakadaro. Ino imba yakadaro ine conical ...
Ndeipi zita rakakodzera re cardio simulator skis?
Nderipi zita rakakodzera reSki simulator? Cardio varairidzi simulators anoteedzera zvakasikwa kufamba kwemunhu: kumhanya, kutsika, kukwira masitepisi, kukwasva, kuchovha. Zvinoenderana neizvi, vanosiyanisa ...
Kudzidzira bhasikoro chimwe chinhu kunze kwemashoko?
Iko bhasikoro rekurovedza rinokupa chero chimwe chinhu kunze kwe abs? ichi chiitiko chakakosha kwazvo pamabvi emabvi nemarunda ... makumbo ndeimwe yeakanyanya kukosha!) mhasuru pamakumbo mapombi kumusoro Anosimbisa ...
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 0,617 masekondi.